ISMACIILOW ADIGU SIRTAAD HAYSO WAANU OGNAHEY EE DARWAL ISAGU SIR MA HAYAA?. | Toggaherer's Blog
« Ma cid ayaa igu diidan cayaartiyo cugashada guud ee UDUB iyo qarankaba
Ma cid ayaa igu diidan cayaartiyo cugashada guud ee UDUB iyo qarankaba. »
ISMACIILOW ADIGU SIRTAAD HAYSO WAANU OGNAHEY EE DARWAL ISAGU SIR MA HAYAA?.
Akhristiyaasha iyo editorskta iyo hawlwadeenada saxaafada Somaliland iyo ta Somalida kaleba, waxaan idinku salaamey salaanta islaamka.
Beri baa nin odey gabadh uu dhaley looga soo fadhiistey, gabadha loo soo fadhiistey waxey aheyd shaarshaari shaqeysata, ninka u soo fadhiisteyna waxa uu ahaa nin xayraana oo bilaa camala. Markii la isu yimid ee la inantii la isa siiyey ayaa reerkii inanta u soo fadhiistey lacag badan bixiyeen, dabeed markii meherkii dhacey ee la kala dhaqaaqey, isuna hadheen qoladii innanta bixisey ayaa waxaa hadley odeygii gabadha dhaley oo la yaabey lacagta la siisey badnaanteedaa waxa uu yidhi dabadeed “Aabo hebalow lacagtan tii Xaliimo ma u maleynaa” Xaliimo waa inantiisii shaarshaarida aheyd.
Imika hadalka Isamciil Aadan nin guulwade hore ahaa inta heshiis hoose lala galey oo dabeed laga baxey, oo imika wixii uu rabey waayey dabadeed Qeylo af labadii waaxey ma u maleynaa.
Ismaaciilow waanu ognahey inuu Riyaale yahey M/weyne African oo kursiga ku dhagan yahey ilaa laga fujiyana aan si sharaf leh uga fuqeynin, lakiin sow adigu ma ogid inaad tahey ninka koowaad ee kursiga ku laxaamadey. Hadii Riyaale aad sir ka hayso waxey ka dhigan tahey Ciyigii waa ka baryey ninkii cuney baa ka liita. (Maalintii ugu horeysay ee aad sirtaa indha saartey, ayey ugu qurux badaneyd inaad qarxiso). Riyaale ma qarsado malaha in uu yahey M/weyne Afircan ah oo musuqmasuq iyo tuugo xilka qaranka kaga sineysata, waxa kale ee aad noo sheegta waa adigoo yidhaahda Somaliweyn buu ku socdaa taasna waaba Lax baa lagaa yidhi. Ina Cigaal, Abdirahman Axmed Ali (Raximu laah labadoodab) iyo kuligood inta Madax Somaliland ahba Xamar bey ku socdaan baa la odhan jirey, Sifir iyo Ina Buubaaba wey sii joogan,.
Anigu waxaan ku odhan lahaa sirtaa ha la dhiman ee soo daa, hadii aanad soo deyn adiga laftaada ayey kuu daran tahey oo dee waxaaba laga yabaa iney xanuun naftaada saheyda kugu noqoto markaa soo daa inaadeer. Murxuunkan ay kaaga dhagteyna waxaan kaa odhan lahaa wuu dhintee godkiisa haa kaa jiifee faataxada uun u mar oo ka daa siyaasadan aad ku soo dareyso Maruxunka dhintey Allaya raxma. Ka daa distooradan iyo xeerarkan aan diinta Islaamka ku jirin ee aad leeday isagaa sameeeyay. Alla ya raxma iyo raxmu laah ayaa inagaga toosan isaga iyo intii dhimateyba ineynu ku soo hadal qaadno.
Waxaan ku qosley sacabka aad tidhi, wanaaga baa lagu tumaa. Walaahi waa runtaa lakiin miyaanad xasuuneyn markii aad laheyd Kulmiyaa ka danbeeyay, Hargeisaa kululaatey—- Kulmiyaa ka danbeeyey—- Islaan baa la diley Kulmiyaa ka danbeeyay.
Dee hadii aad Hargeisa wax ku dishana Riyaale imikaba ku dil ha loo soo joogee, malaha lakiin isagana Boorame ayuu wax ku dili karaa.
Gees baa ka sheekeyey sheeko maalin golaha wasiirada ka dhacdey intuu Maxamed X.Ibraahin Cigaal M/weynaha ahaa. Waxey sheekadu aheyd malaha nin reer Hargeisa ah oo wasiirada ka mida ayaa si yara caga damdam leeyey, wasiir kale oo Gobalada beri ka soo jeeday.
Ina Cigaal oo dee Libaax ahaa ayaa si duur xula ula hadley ninkii wasiirka ahaa, waxaanu ugu maahmaahmey sheekadii Gorgor ku dhex martey ninka Reer Cawl ee qoriga lahaa ee magta loo soo doontey iyo nin ka mida ragii magta soo doontey. (Hebel ha loo sheego in aan qorina qorigiisa oo qudha aanu aheyn magaalo dhamina in aaney Gorgor uun aheyn). Anigu waxaan ku odhan lahaa halkaa baalixooftada ka daa Ismaaciilow magaalo oo dhami Hargeisa uun ma ahe.
Waxaan ku soo xidhayaa, Cabadilaahi Darawal markii uu wasiirka ahaa Guulwade muu aheyn, ee nin wasaaradiisa uun xilka ka hayo uun ku kooban ayuu ahaa, weliba wuuu is casiley ee cidna may eryin. Adiga lakiin waa tii ay sheekadu dunida dacaladeed gaadhey.
Hubaal inuu KULMIYE ku guleysan doono doorashada, weliba Riyaale iyo adiga toona dalku u baabi`i maayo ee wuu jiraya dalku. Adigana talo waxey kuugu toosnaan laheyd adigoo dib i soo saxa oo wixii hore wanaag ku badala. Dee hadii kalena Sweden- noogu kaaley aynu harwaajihii ku iibinee.
Adiga iyo akhristayaashuba ku soo dhawaaada M.I.Warsame Hadrwaawi gabeygiisa Gudgude, qeybta ka hadleysa Beerista Diktaatorka iyo kuwa dhidabada u aasa Dikteytarka nooca ay yihiin.
Nin hadduu tashiga guuto faran, keli ganaanaysto
Gaaraayucuuntiyo shinnida, gurucya dhaadheerta
Giiryaalayaashiyo fulaa, laguma guuraanka
Gumarta iyo maajeenta iyo, geed-xunkiyo tuugga
Gungunnaafka iyo maarta iyo, gocorka aan quudhin
Kun ninoo guraangura hadduu, goob isugu keeno
Guufkiyo haddii hooda iyo, giniga loo qaybsho
Dadka kale intii gudan haddii, gararka loo jiido,
Ninka gaaban meel dhow haddii, looga geda-sheegto
Guubaabadeedii haddii, loogu godadleeyo
Hadallada galoofta ah haddii, loogu mala gaaxsho
Guryo-noqoshadeedii haddii, lagu gawaan-raacsho
Gabbal daye sidiisii hadday, laba gar-daymooto
Shimbiraha gabraartiyo hadday, galow wax weydiiso
Kol hadday galaydh soo kallahay, laabta uga guuxdo
Garba-raar cadhaysani hadduu, gooyo taladeeda
Guulkeedu dheeraa sidii, geenyadii Bixine
Weligeed fal baa loo guntaa, lagu guhaamaaye
Mar uun bay gadooddaa siday, gees lo’aad tahaye
Galab xiisaheedaa wakhtigu, kaga gaboobaaye
Ninuun baa ku guuree iyada, geeddi waw weliye
Ayay kii Jannada geyn lahaa, dayasho goobtaaye
Marka uu galaa buu iyaga, guba yidhaahdaaye
Markay raar guraysaba nin bay, gudub tidhaahdaaye
Gabno ugubi way quusisaa, gaawe Cumarowe
Gar-ma-qaatayaashiyo dadkaa beera, ruux gudhane
Keligii inuu guurti yahay, maalintaa gunudye
BY:Osman Omar Dool